आफू सुतेको भि’डियो लाइभ गरेरै लाखौं कमाइरहेछ्न मानिस,(भिडियो ) – Krazy NepaL
आफू सुतेको भि’डियो लाइभ गरेरै लाखौं कमाइरहेछ्न मानिस,(भिडियो )
May 8, 2021 246
निद्रा त्याग्दै मानिसहरू मेहनत गरेर पैसा कमाउँछन् । तर सुतेर पनि पैसा कमाउन थालिएको छ । अनेकौं कम्पनीहरूले मानिसहरूलाई सुत्नका लागि पैसा दिइरहेका छन् ।
वायर्ड नामक एक टेक वेबसाइटले इन्टरनेटमा लाइभ स्ट्रीमिङ कम्पनी ट्विचले आफ्ना प्रयोगकर्ताहरूलाई सुत्नका लागि लाखौं रुपैयाँ दिइरहेको लेखेको छ ।
प्रयोगकर्ताहरूले एक रातमै लाखौं डलर कमाउँछन् । अमेरिकाका एक भिडियोमेकरले आफू सुतेको लाइभ स्ट्रीमिङ गरेर ५ हजार ६०० डलर कमाए
यसमा प्रयोगकर्ताले केही गर्नुपर्दैन । आफू सुतेको बेलाको भिडियो लाइभ स्ट्रीमिङ गरे पुग्छ । ट्विच प्रयोगकर्ताहरू सुत्नुअघि वेबक्यामलाई ओछ्यानतिर घुमाइदिन्छन् । अनि उनीहरू सुतेको रेकर्डिङ गरेर लाइभ स्ट्रीमिङ गर्छन् ।
प्रयोगकर्ताले लाइभ स्ट्रीमिङ गर्दा फलोअरहरूले पैसा दिन्छन् । त्यसमार्फत प्रयोगकर्ताहरूले एक रातमै लाखौं डलर कमाउँछन् । अमेरिकाका एक भिडियोमेकरले आफू सुतेको लाइभ स्ट्रीमिङ गरेर ५ हजार ६०० डलर कमाएको बताए ।
अन्लाइन शपिङ वेबसाइट अमेजनकै सानो कम्पनी हो ट्विच । त्यसको लाइभ स्ट्रीमिङमा संसारभरिका डेढ करोड प्रयोगकर्ता छन् । उक्त वेबसाइटमा प्रयोगकर्ताले सुतेको मात्र नभई दिनमा गरेको कामको पनि भिडियो वा लाइभ स्ट्रीमिङ गर्न सक्छन् ।
प्रयोगकर्ताहरूले पैसा कमाउनका लागि पेड सब्सक्रिप्सन, विज्ञापन रेभेन्यु र डोनेसन लिन्छन् ।
Prevयी हुन् विश्वकी सबैभन्दा ‘क्युट’ बालिका, ३ वर्षको उमेरमै मोडलिङको चर्चा (फाेटाे फिचर)
Nextबिबाहित पुरुषहरु परस्त्री सङ्ग किन सल्किन्छ्न, जान्नुहोस कारण,
७ बार मध्ये यी बार जन्मेका व्यक्ति हुन्छन् धेरै भाग्यमानी ! तपाईको राशि हुन हो ? हेर्नुहोस् …
“प्रत्येक दिन तपाईंले काजु खानु भयो भने तपाइँको जीवनमा ल्याउनेछ एस्तो चमत्कार”
हटस्पट बन्दै काठमाडौँ एकै पटक देखियो १०५१ जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि
“मलेसियामा नेपाली युवकले नेपाली युवतीको नि,र्मम ह, त्या गर्यो ( भिडियो हेर्नुस )” (12621)